Họrọ Igwefoto Jikinụ Kwesịrị Ekwesị - Ngwọta OMG
Họrọ Ezi Ahụ-Ekiri Ekiri
Nnukwu nhọrọ igwefoto dị na ahịa ahụ nwere ike ime ka ịhọrọ nke dị mgbagwoju anya. Onye ahia ahia gha ebu uzo mara ihe odi ha mkpa. Iji maa atụ, awa ole edekọ ole ka ha chọrọ? Kedu otu ha chọrọ iyi igwefoto (ya bụ, okpu agha ma ọ bụ ubu ma ọ bụ obi naanị), ka ha chọrọ nkwanye ndụ ma ọ bụ na-edekọ naanị, otu ihe dị nha-nha-dabara nke ọma karịa sistemụ modulu na-enye ikike maka ịhazi ya (dịka, ijikọ. igwefoto mpụga), njirimara nchekwa dịka izo ya ezo ma ọ bụ ọkwa ikike dị iche, ihe sistemụ VMS iji, wdg.
Imirikiti igwefoto na-abịa site na ndekọ tupu ime ma malite ndekọ mgbe onye ọrụ pịrị a bọtịnụ. Ihe ndi ozo gbasasiri bu nbido vidiyo (iji mee ka nbudata ngwa ngwa), na-eme ka ilele ihe ndekọ vidiyo na ngwaọrụ ndi ozo (dika, ndi uwe ojii, ebe enyere iwu, mbadamba, wdg). Onyinye ozo na-enuba vidiyo site na 3G / 4G iji tinye na mmata onodu ya na ntinye isi. Anyị kwenyere na ọdịnihu dị na ụlọ ọrụ a na ngwakọta a na-agbanye na ndekọ na ndụ.
Ebe enwere ike iji ihe ndekọ vidiyo nke ahụ na-egosi dị ka ihe akaebe n'oge ikpe ụlọ ikpe, ụlọ ọrụ aghaghị ijide n'aka na ngwaahịa ha na-agbaso usoro iwu dị iche iche banyere ijigide ntụkwasị obi nke ihe ngosi dijitalụ. Enwere ọtụtụ njirimara ndị a na-ahụkarị iji jide n'aka na data guzosiri ike. Ntinye nkwado dị iche iche na-ejide n'aka na onye uwe ojii ahụ nke yi igwefoto enweghị ụzọ itinye aka na vidiyo ahụ, ihichapụ ya, ma ọ bụ gbanwee ya.
Na Zepcam dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ọkwa ikike atọ: ọkwa onye ọrụ (na-enye ohere ịdekọ ma na-agba ndụ naanị, mana enweghị nhichapụ faịlụ ma ọ bụ ntinye ntinye faịlụ edekọ), superuser (nke na-enye ohere ịdekọ na gụgharia ndụ, yana ikike ihichapụ faịlụ na ohere, faịlụ edekọ), na ọkwa onye nchịkwa, nke na-agbakwunye ihe ùgwù nchịkwa usoro n'elu ọkwa larịị.
Ikpughe gosiputa vidiyo nke vidiyo dika ha na-ebugo ha na sistemụ vidiyo. Enwere ike ilele faịlụ naanị na kọmputa enyere ikike ma ọ bụ naanị ndị ọrụ nwere paswọọdụ dabara adaba iji kpọghee nzuzo ahụ. Usoro a na-edobe ihe ndekọ edeputara ọhụụ na ihe omume ọ bụla emere na faịlụ dị na sistemụ site na mgbe ebugo ya na oge ndụ ya. Ndekọ nyocha ahụ na-edekọ oge / ụbọchị nke ihe ahụ mere, onye ọrụ gburu ya, kọmpụta ebe e mere ihe ahụ, na nkọwa nke ihe ahụ n'onwe ya. Ihe mmezi na-enye ike izobe faịlụ, enwere ike iji ya mgbe eburula ihe na-aza oku. Enwere ike ịlele faịlị zoro ezo site n'ọkwa ọrụ ka onye nchịkwa kọwaa. Nke a na-enyere aka ịchekwa ozi ọzọ n'ime ngalaba ndị uwe ojii.
A na-echekwa vidiyo vidiyo na ngwaọrụ ahụ ugboro ugboro wee tinye ya site na ọdụ na-docking n'akụkụ ikpeazụ nke ngbanwe - ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na-anakwa igwefoto maka ihe ngere ọzọ. Maka ọtụtụ ụdị ndị nrụpụta, ndị ọrụ njedebe nwere ike ịhọrọ n'etiti nchekwa mpaghara na nchekwa igwe ojii. N'agbanyeghị nnweta nhọrọ a, ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ kwetara na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmanye iwu na-egbu mgbu na ịchekwa ihe ngwọta ha n'igwe ojii. Imirikiti ndị ahịa anyị na-eji ihe nchekwa mpaghara. Uru nke nchekwa igwe ojii bụ na faịlụ enwere ike ịbanye na ebe ọ bụla na Internetntanetị; agbanyeghị, enwere ike ile nke a anya dị ka ọghọm site na ụfọdụ adịghị mkpa nke nchekwa data.
Ufodu obodo anabataghi obi ha ka edobe data ha n’obodo ndi ozo ma nwekwa iwu zuru oke nke adighi aha ha. Enwere misapprehension nke nchekwa mpaghara nwere ike ịchọ nlebara anya na nchekwa karịa nke igwe ojii mgbe ị na-ewepụta oke vidiyo data.
Barnzu nke Vizucop tinyekwuru nchegbu: gịnị na-eme data ahụ mgbe nkwekọrịta mbụ ahụ gwụsịrị? Ka anyị kwuo na ị ga - enwe nkwekọrịta afọ atọ ma ị jisie ike jụọ onye na - eweta ngwaahịa dị ọnụ ala karịa mgbe ọ kwụsịrị. Agencieslọ ọrụ dị iche iche ga-enwe ike ịgagharị ozi ha echekwara?
Ngogo elu nke nwere mmasi maka igwefoto ahu na ego nnweta ewetarala otutu ụdị n'ahịa. Ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịma ma gbaa mbọ hụ na ha zụrụ n’aka ndị nrụpụtara ama ama nke nwere ike inye nkwado dị mma.
Ikwesiri ihu igwefoto nke igwefoto a, guzosie ike nke ulo oru ma obu onye sitere na onye huru uzo di ala na mba ozo ebe enweghi nkwado obula. Ọrụ ndị ahịa buru ibu na ụlọ ọrụ a, ụlọ ọrụ mmanye iwu chọrọ oge azịza ngwa ngwa. Yabụ na ndị na-eweta igwefoto dị ọnụ ala ga-ama jijiji, ọnụahịa nke ọrụ mgbe-azụchara wepụrụ obere ndị egwuregwu.
Kedu ihe ị ga - eche n’uche mgbe ị na - enweta Igwefoto-Worn? Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị iche ihe niile site na ngwaọrụ gaa na ngwa ọdịnala na usoro ahụ niile site na njide gaa n'ụlọ ikpe gụnyere idekọ akara dị mkpa, ịkọzighachi nkọwa dị ka ọkwa mpempe akwụkwọ na ihu, ịkekọrịta na ijikwa ikpe ahụ, na igosipụta vidiyo vidiyo n'ụlọ ikpe. Anyị na-agba ndị ahịa ume ka ha tụlee ogo nke ọ bụghị naanị igwefoto ahụ nwere onwe ya kamakwa nke njikwa njikwa ga-edowe data ha nakọtara.
Ọtụtụ ọrụ mberede ugbu a bụ agba nke atọ ha ma ọ bụ nke anọ n'ịzụrụ Isi Worn Cameras. Gịnị ka ndị bịara ọhụrụ kwesịrị icheta? Anyị na-atụ aro ka ndị zụrụ azụ kwesịrị ịjụ onwe ha:
Ihe ahụ ụmụ nwanyị ahụ a na-eji ebula ahụ achọta chọrọ?
Kedụ ka anyị ga-atụgharị ndekọ vidiyo niile anakọtara na sistemụ nchekwa?
Oge oru oma?
Kedụ ka anyị ga-esi fanye ngwaọrụ ndị a ma achọkwa mmezi ọ bụla?
Kedụ ka anyị ga - esi jikwaa data a nke ọma: mpaghara ma ọ bụ igwe ojii?
Ego ole nha ọ bụla na-eme, oleekwa uru na ọghọm dị?
Ego ole ka igwefoto-Worn Camera na-eri?
Kedụ akwụkwọ ikike ndị metụtara ọrụ na emebi?
Shzọ ezi uche dị na ịre ere bụ opekata mpe nke ndị na-ere ahịa na-akụ azụmaahịa gị, na-ekewapụta ihe atọ kachasị mkpa nke ngwọta Ahụ-Worn Cameras: ngwaọrụ igwefoto (ịdị mma nke ihe eji arụ ọrụ, arụmọrụ, ndụ batrị, ike, akwụkwọ ikike nke nnọchi, nchaji ) nchekwa nchekwa (ịchọrọ mpaghara mpaghara ma ọ bụ igwe ojii? Olee otu ị ga - esi chọọ ụfọdụ ndekọ vidiyo ahụ? Onu mmadụ ole nwere ike iru foto ahụ? O kwekọrọ n'ụkpụrụ ikpe nke njikwa ihe akaebe? Gịnị bụ atụmatụ ọpụpụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ndị na-eweta ngwaahịa?) Mgbe ahụ akụ na bolts ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ (a zụrụ ya n'ezoghị ọnụ, ma ọ bụ nkwekọrịta kwa ọnwa? thegwọ ọnụ nke ngwaike ahụ gụnyere mkpebi nchekwa?).
Zepcam's van der Aa na-atụ aro iji ngwọta igwe ojii ka ị ghara inwe nsogbu ọ bụla ịtọlite ​​IT na nzukọ gị - ma chọpụta ebe ezigbo uru dị na nzukọ gị. Yabụ, ịmalite ịkwalite atụmatụ maka ikpuchi elu.
Ọ nwekwara ike ịdị gị mkpa ịbịaru nso, ọ na-atụ aro. Onye na-ere ahia gị gosipụtara ọnọdụ ọ ga - abụ ihe ga - eme n'ọdịnihu? Ọ nwere ike ijigide igwefoto karịa? A kwadebere maka mmeghachi vidiyo ma ọ bụ nchịkọta? Enwere ike itinye ya na sistemụ ndị ọzọ? Ọ dị mkpa ịnwe ikpo okwu nwere ikike ịdọ aka.
Chọpụta onye ị pụrụ ịtụkwasị obi. Pinnacle's Whitley kwuru: Dika Ahụ Worn Cameras nabatara nke ọma, enwere ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa dị ọnụ ala karịa. Mgbe ị hụrụ ngwaahịa nke pịrị ọnụ nke ụdịdị, nke bụ eziokwu bụ na ọ yikarịghị ịme nke ahụ.
Isi ihe ole na ole ị kwesịrị iburu n’uche gị, kedu ihe ị na-achọ iji nweta kamera na-ahụ maka ahụ? Ọtụtụ ndị ahịa echeghị na tupu ha abanye usoro ahụ. Gwa ndị ahịa na-eji ngwaahịa a banye na ndị ìsì a.
Ihe ị ga-eche na isi na-eme na ihe ọ bụla maka ịzụta kamera eyi.
Tụlee mkpokọta nkwenye na data ị ga - anakọta - ị ga - achọ usoro nke nwere ike ijikwa ya ma hụ na echekwabara ọtụtụ ihe akaebe.
Ọ nwere ike ịchịkwa ya ma gbaa mbọ hụ na echekwabara ọtụtụ ihe akaebe.
Tụlee Ahụ Worn Cameras ma ọ bụrụ na ịnọghị na nchekwa nchekwa ọha - ọ bụrụ na ndị ọrụ gị na-anọkarị n'ọnọdụ ebe ọ bụ okwu otu onye megide nke onye ọzọ, ha nwere ike ịkwado ibelata ụgwọ iwu na ịkwụsị omume ọjọọ.
Iji mezuo omumu ihe omumu iji nweta mmetuta maka uru na oru achoro iji bulite aru ndi ahu ndi n’aru ndi oria-Worn Cameras.
Echefukwala icheta ihe ọdịnihu - leba anya n’otú ihe ị chọrọ ga-esi gbanwee ma ọ bụrụ na sistemụ ị na-atụle ga-enwe ike ikwado ha.
Abanyela aka na ahịrị ọ bụla na echere n'echeghị ma ị ga-ejide gị ma ọ bụrụ na ị ga-erere gị otu onye na-ere ahịa.
Na njedebe nke arụmụka anyị, anyị na-enye echiche site n'aka ndị isi na-ahụ maka ndị uwe ojii Michael Barsky. Ọ na-atụ aro na ịhọrọ igwefoto ahụ nwere ahụ nke dị mma maka gburugburu gị, ị ga-ebu ụzọ chee na ihe ị ga-eji. Ozugbo i kpebiri na ihe kpatara ngwaọrụ dị na gburugburu gị, ịkwesịrị ịgakwuru ndị isi ndị ahụ na mpaghara ikike mmadụ, nzuzo yana nnwere onwe nke ozi, ndị otu kwesịrị ekwesị, yana ndị ọka iwu ikpe. Ndị isi egwuregwu a ga - agwa gị ọrụ gị, ma duzie gị ka ị rụọ ọrụ nke ọma, site na ịhapụ ihe ndị na - echegbu ha na ihe ha chọrọ.
Ndị otu gị ga-ekpebi ihe ọrụ dị mkpa ị kwenyere na ị nwere maka teknụzụ, gụnyere igwefoto, ngwanrọ, usoro nkwupụta, na nchekwa. Mgbe ahụ, ọ bụ naanị mgbe ahụ ka a ga-etinye gị nke ọma iji chọpụta ma enwere ezigbo ngwọta maka mkpa gị, na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Nzuzo 5489 1 Echiche Taa